‘भीआईपी यौन काण्ड’: रोशनी शाहीका श्रीमानले दिए डिभोर्स (पत्रसहित)
काठमाडौं । ‘प्रीय जनहरु, थुप्रै उतार चढावका बीच वितेका हाम्रा साथसाथ २८ वर्ष दिनहरु विते ।
समयको गतिसँगै असहमति असन्तुष्टि आउँदा रहेछन् ।
तथापी खुशी साथ अलग बस्ने निर्णय गरेका छौ।
कानुनी प्रक्रिया निरन्तरताका साथ’ सम्बन्ध विच्छेद पत्रमा भनिएको छ ।
उक्त पत्रमा रोशनी शाही र उनका पति चित्र जंग शाहीले हस्ताक्षेर गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : महरा र रोशनीमध्ये को जेल जालान् ? कानुनविदले देखेका यी सम्भावना
‘भीभीआईपी यौन काण्ड’: रोशनी शाही जेल
काठमाडौं - रोशनी शाहीले किटानी जाहेरी दिएको भए निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्थे । किटानी जाहेरी आएमा पक्राउ गर्ने भनाई नेपाल प्रहरीबाट आइसकेको थियो । तर, रोशीनले किटानी जाहेरी दिइनन् । आफूमाथि जर्बजस्ती भएको दाबीसहित मिडियामा भनाई बाहिर ल्याइन् । तर, कानुनले मिडियामा दिएको बयानलाई मुख्य प्रमाण मान्दैन ।
घटनाको प्रकृति र घटनास्थलको प्रमाणलाई मुख्य मान्छ । त्यसबाहेक जर्बजस्ती भएको हो होइन फोरेन्सिक जाँच हुन्छ ।रोशनीले किटानी जाहेरी नदिएपछि अनुसन्धानका कतिपय विषय रोकिएका छन् ।
आफैले आरोप लगाएको विषयलाई एकै रातमा बयान बदलेर रोशनी असामान्य ढंगले प्रस्तुत भइरहेकी छिन् । उनले आफू डिप्रेसनको रोगी भनिन् । यसो हो भने उनी किन संसदको कर्मचारी भएर बसिन् ? मंगलबार साँझबाट उनले फेसबुकमा लगातार महराको पक्षमा पोष्ट गरिरहेकी छिन् । उनीविरुद्ध जाने जो कोहीमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेकी छिन् । आफैले बोलाएर अन्तवार्ता दिएका पत्रकारलाई तथानाम लेखेकी छिन् ।
यदि रोशनी शाहीले महरालाई आरोप लगाएको हो भने यो घटनामा उनी दोषी छिन् । महराको चरित्रहत्या भएको छ । यदि रोशनीले झूटको खेती गरेकी हुन् भने महराको पदसमेत जानेगरी चरित्रहत्या गर्ने रोशनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कानुनले कसैमाथि झुटो विषय पेश गरेर चरित्रहत्या गर्ने या संवेदनशील जर्बजस्तीको आरोप लगाउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
रोशनी किन रातारात बयान फेर्दै जसका विरुद्ध उभिइन् उसैको पक्षमा लागिन् भन्ने गम्भीर विषय बनेको छ । यसले नेपालमा उच्च तहबाट पहुँच र प्रभावका भरमा घटनालाई छोप्ने या मोड्ने गतिविधि भइरहेको त छैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
याैन काण्ड : सरकारले दियो रोशनी शाहीलाई सुरक्षा, असई खटाईयो
काठमाडौं । कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आरोप लगाउने संघीय संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई सरकारको निर्देशनअनुसार प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ ।
शाहीलाई सुरक्षा दिन प्रहरीले एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक खटाएको छ । शाहीले आफूमाथि महराबाट बलात्कार भएको भनेर बोलेको भोलिपल्टै बयान फेरकी थिईन् ।
हिजोमात्रै आफूलाई फसाईएको बताउँदै यो प्रकरणमा महराको कुनै दोष नभएको जिकिर गरेकी थिईन् ।
तर, मिडियामा महराले शाहीलाई जबरजस्ती गरेर बोल्न लगाएको र बेपत्ता बनाईएको हल्ला चलेको थियो ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले शाहीको सुरक्षामा प्रहरी खटाएको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : याैन काण्ड : पुन: महराकाे दाेस्राे पटक राजीनामा, संसद सचिवालयले वेबसाइटबाट नाम हटाइयाे
काठमाडाैं । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराको पहिलो राजीनामा विवादित भएपछि दोस्रोपटक पुन: दोस्रोपटक राजीनामापत्र बुझाएको छन्।
महराले मंगलबार शर्तसहितको राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । जसमा छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि भन्ने उल्लेख थियो । महराले बुझाएको राजीनामा राखिएको भाषा उपसभामुखले चित्त नबुझाएपछि दोस्रो राजीनामा माग गरिएको थियो।
सभामुख पदबाट महराले दिएको सर्तसहितको राजीनामा पत्र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अस्वीकृत गरेपछि मंगलबार बिहान पुनः राजिनामा बुझाएका हुन्।
अर्को राजीनामा पत्रका आधारमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बुधबार दिउँसो महराको राजीनामा आएको सूचना संसद सचिवालयमा टाँस्न लगाएकी थिइन्। उक्त सूचनामा पनि महराले पहिलो पटक बुझाएको राजीनामा पत्रमा भएजस्तो सर्त उल्लेख छैन।
संसद सचिवायले सच्याउँदै टाँसेको सूचनामा आरोपबारेमा सत्यतथ्य छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी राजीनामा दिएको उल्लेख गरिएको छ। महराले पहिलो राजिनाममा छानबिन नभएसम्मका लागि भनेका थिए। तर उपसभामुखले राजीनामा बुझेपछि जारी भएपछिको सूचनामा छानबिनका लागि सहज होस् भनि उल्लेख गरेको छ।
नेकपाले यो संगै अव महराको स्थानमा नयाँ सभामुख चयन गर्ने बताएको छ । संसद सचिवालयले उपयुक्त समयमा अव नयाँ सभामुख छान्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने सचिवालयको दावी छ ।
महराको नाम संसद सचिवालयले वेबसाइटबाट हटाइयाे
त्यसैगिर महराकाे नाम संसद सचिवालयले वेबसाइटबाट पनि हटाएकाे छ।
उपसभामुखको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २११ को उपनियम २ अनुसार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको सूचना संसद सचिवालयमा टाँसिएसँगै संघीय संसदको प्रतिनिधिको वेबसाइटबाट महराको नाम बुधबार दिउँसोबाट हटाइएको हो ।
‘भीभीआईपी यौन काण्ड’: पद गुमाएका महरालाई २४ घण्टाभित्रै राहत